Donny van de Beek oo ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Manchester United – Gool FM
Donny van de Beek oo ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Manchester United
(Amisterdam) 01 Seb 2020. Donny van de Beek ayaa la soo warinayaa inuu ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda kubadda cagta Manchester United, waxaana uu haatan isku diyaarinayaa inuu adduun dhan 40 milyan oo gini ugu wareego garoonka Old Trafford.
Laacibka khadka dhexe ee Ajax ayaa qarka u saran inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League oo uu ku biiro Red Devils, taasoo ka yeeleysa inuu noqonayo saxiixii ugu horreeyey xagaaga ee Tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Van de Beek ayaa haatan la jooga xulka qaranka Netherlands ee isku diyaarinaya kulamadooda UEFA Nations League ee ay la kala ciyaarayaan xulalka Poland iyo Italy, laakiin sida laga soo xigtay Sky Sports News, ciyaaryahankan khadka dhexe ayaa haatan tijaabada caafimaad u maray Man United.
Heshiiska ayaa la filayaa in la dhammaystiro maalmaha yar ee soo aaddan, inkastoo tilmaamaha Korona uu u baahnaan doono 14 maalmood oo karantiil ah marka uu yimaado UK, warbixintu waxay sheegaysaa in Van de Beek uusan u baahnaan doonin inuu iskiis isu go’doomiyo haddii uu u diiwaangashan yahay ciyaaryahan ka tirsan Man United ka hor inta aysan xulka Netherlands ka qeyb galin tartanka UEFA Nations League.
Xulka Netherlands ayaa 4 bishan September la ciyaari doona Poland ka hor inta aysan la dheelin Talyaaniga saddex maalin kaddib, Van de Beek ayaana la warinayaa inuu u safri doono UK, marka labadaas kulan la ciyaaro.
23-sano jirkaan ayaa loo diiwaan geliyey 10 gool iyo 10 caawin oo uu u sameeyey kooxda Ajax tartammada oo dhan intii laguda jiray xilli ciyaareedkii dhammaaday ee 2019-20.
Chelsea oo Inter Milan ku wargelisay qiimaha ay ku heli karto N'Golo Kante & Tababare Conte oo saddex xiddig ka doonaya kooxdiisii hore